နှစ်သောင်းကျော်လောက်နဲ့ Camping အရသာကိုခံစားလို့ရစေမယ့် ရန်ကုန်မြို့နဲ့မနီးမဝေးက ဒင်ကြီး Camping Site ⛺️⛺️⛺️ – YANGON STYLE
TD တို့နေခဲ့တဲ့ Camp Site
သဒ္ဓါတို့တွေ ရုံးပိတ်ရက်ကရက်ရှည်လဲမရဘူး ?
ခရီးအဝေးကြီးသွားဖို့လဲအဆင်မပြေဘူး? စရိတ်လဲသက်သာချင်တယ် 🤔 camping အရသာကိုလဲခံစားချင်တယ်ဆိုတဲ့သူများအတွက် ရန်ကုန်မြို့နဲ့မနီးမဝေးမှာရှိတဲ့ Din Gyi Camping site ဆိုတဲ့နေရာသစ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ Din Gyi ဆိုတဲ့နာမည်ကတော့ အဲ့မှာကျက်စားနေထိုင်တဲ့ ဒင်ကြီးလို့အမည်ရတဲ့ငှက်နာမည်ကို အစွဲပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။🤗
သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးခေါ်သွားဖို့တော့လိုမယ်နော်။ ဒါမှအရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းမှာသေချာတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ Drama City ကနေခဏလောက် ရှောင်ထွက်ပြီး လက်ဆက်တဲ့သဘာဝလေထုနဲ့ တိတ်ဆိတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်လေးမှာ Camping လေးလုပ်ကြည့်ပါ။ နောက်နေ့ ရုံးသွားဖို့၊ ကျောင်းသွားဖို့ ခွန်အားအသစ်တွေရော အကြံညဏ်သစ်တွေရော ရလာမှာသေချာပါတယ်။
⛺️ဒင်ကြီး Camping Siteကိုဘလိုသွားမလဲ?
Budget ချွေတာချင်ရင်တော့ စော်ဘွားကြီးကုန်းကနေ ပဲခူးကားတွေစီးပါ။ တစ်ယောက်မှ ၁၀၀၀၊ ၁၅၀၀ကျပ်ပဲကျပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ကားရှိရင်လဲကားနဲ့ သွားလို့ရတာပေါ့။ ပဲခူးကားကိုစီးပြီး အင်းတကော်မြို့ ဆိုင်းဘုတ်အကျော်မှာ ရပ်ပေးပါလို့ပြောပါ။ အဲ့နားမှာ နန်းဦးလွင်တောရကျောင်းသို့ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လေးရှိပါတယ်။ မျှားပြထားတဲ့အတိုင်း အထဲကဝင်ရမှာပါ။ ဒင်ကြီး Camp siteလို့ပြောလိုက်ရင် ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီတွေရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်ကို ၁၅၀၀ ကျပါတယ်။ လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ နေလဲပူပြီးအတော်လှမ်းပါသေးတယ်။ သဒ္ဓါတို့လဲလမ်းမှားပီး လမ်းလျှောက်ခဲ့ရလို့ ကိုယ်တွေ့ပါ😂 ကဲပြီးရင်တော့ camp site reception ကိုရောက်ပါပြီ။ လက်မှတ်ဝယ်ထားတာလေးကိုပြပြီး ဝါးရုံတောတွင်းလမ်းလေးကိုခဏလေးလျှောက်လိုက်ရင် ကန်ရေပြင်အကျယ်ကြီးနဲ့ သာယာတဲ့ Camping site ကြီးကိုရောက်ပါပြီရှင် 🤗🤗
Page မှာမနက် ၇နာရီကနေ ည၇နာရီအတွင်းဝယ်လိူ့ရပါတယ်။ လက်မှတ်က တစ်ယောက်ကို ၉၀၀၀ပါ။ Tent ကတော့တစ်လုံးကို ၁၀၀၀၀ကျပ်ပါ။ တစ်လုံးကို ၂ယောက်အိပ်လို့ရပါတယ်။ Tent မထိုးတက်ရင်လဲ သူတို့ကူထိုးပေးပါတယ်။ ကိုယ်နေချင်တဲ့နေရာကိုရွေးပီးနေလို့ရပါတယ်။ Bushcraft Cabin သစ်သားအိမ်ပုံစံလေးတွေလဲရှိပါတယ်။ နေမယ်ဆိုရင် တစ်လုံးကို ၁၀၀၀၀ထပ်ပေးရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန်ဆိုမလိုပါဘူးနော်☺️ သန့်စင်ခန်းလေးတွေလဲရှိတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ထင်းလဲ နှစ်စီးပေးလိုက်သေးတယ် 😊 ဒါပေမယ့် တညလုံးစကားတွေပြောနေကြမှာဆိုတော့ မလောက်ဘူးလေ ထပ်မှာလို့ရပါတယ်။ တစ်စီး ၅၀၀ပဲ 😍
Tent ထိုးမယ့်နေရာရွေးတော့ သဒ္ဓါတို့သွားတုန်းကတော်တော်ဘရုတ်ကျပီး ဆူဆူညံညံအဖွဲ့တဖွဲ့ရှိနေလို့ နေရာကောင်းကိုတော့မရလိုက်ပါဘူး ☹️ နောက်တစ်ခါသွားရင်လဲ အဲ့လိုအဖွဲ့မျိုးတေနဲ့မဆုံရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ စည်းကမ်းလေးတွေလဲပိုထုတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။👌👌👌
Camping site မှာဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲ?
ကန်အလည်ခေါင်မှာ Roofed Raft လေးရှိတော့ အဲ့မှာထိုင်ပြီး ငါးမျှားလို့ရပါတယ်။ လှေစီးလို့လဲရပါတယ်။ တစ်စီးကို ၃ ယောက်ပဲစီးလို့ရပါတယ်နော်။ တစ်ချို့တွေ ၄ ၅ ယောက်တက်စီးပြီး လှေတောင်မနိုင်ပဲ ပျော်ပါးနေကြတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေကတောင်ပြောမနိုင်ဆိုမနိုင်တွေမလို့ သဒ္ဓါတို့လဲ လှေနားတောင်မကပ်ခဲ့ရပါဘူး။ နောက်တခါမှအေးဆေးသွားနေပါဦးမယ် 😾😾
​ ပြီးတော့ Organic Farm ရှိပါတယ်။ လက်လက်ဆက်ဆက် ကန်စွန်းရွက်တွေခူးပြီး ကိုယ်တိုင်ကြော်စားလို့ရပါတယ်😍
အဖွဲ့လိုက်ဆိုရင်တော့ Game တွေကစားပြီး ဟိုနားသွားပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက် Tent ထဲဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်နဲ့ ပျော်စရာကြီးပေါ့ 🤗 ဟော့ပေါ့လဲမှာစားလို့ရသေးတယ်နော်။ ဒါပေမယ့် ဟော့ပေါ့က လက်မှတ်ဝယ်တည်းကကြိုမှာရတာပါ။
📍 စောင်ပါးပါးတထည်နဲ့ ခေါင်းအုံးလို့ရမယ့်အရာတခုခု Tent ကပါးတော့ မနက်ဆိုအရမ်းအေးပါတယ်။
📍 ကော်ဖီသောက်တတ်ရင် ကော်ဖီခွက်လေးလဲထည့်ခဲ့ပါ။
📍Wet Tissue ရိုးရိုး Tissue ယူခဲ့ပါ။
📍power bank, ဓာတ်မီးယူခဲ့ပါ
📍 အရေးကြီးတာ UNO 🤪 ဂိမ်းကစားတဲ့ဟာတွေ
ဒီလောက်ဆိုရင် Camping သွားလို့အဆင်ပြေပါပီ။ ကိုယ့်အပေါ်မူတည်ပြီး စားချင်သောက်ချင်တာလေးတွေလဲထည့်သွားလို့ရပါတယ်။
Camping ရဲ့အရသာကိုသိချင်ရင်တော့ ဖုန်းလေးကိုခဏပိတ်ပြီး ညဖက်ရောက်ရင် မြက်ခင်းပြင် (သို့) ဖျာပေါ်လှဲပြီး ကြယ်တွေကြည့်ပါ။ ဘဝရဲ့အရသာတစ်ခုပါပဲ😊 သဒ္ဓါကတော့ မီးပုံဘေးမှာ ကော်ဖီလေးသောက်ပြီး ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ကြယ်တွေထိုင်ကြည့်နေရတဲ့အရသာကို ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ပါဘူး ☺️
ရန်ကုန်မှာနေရင် ကြယ်တောင်ကောင်းကောင်းမမြင်ရပါဘူး။ သဒ္ဓါကတော့ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ကြယ်တွေကို တစ်ဝကြီးထိုင်ကြည့်ခဲ့တယ်လေ 🥰
ပြီးရင်တော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဂိမ်းတွေကစား၊ UNO တွေဆော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စကြနောက်ကြ ရယ်မောကြရင်း အကင်တွေကင်စား😍
တစ်ယောက်တစ်မျိုး မတူညီတဲ့ဟာသအပြောအဆိုလေးတွေနဲ့ ရင်းနှီးမှူတွေ ပိုတိုးစေမယ့်ညလေးတစ်ညဖြစ်မှာသေချာပါတယ်။
သဒ္ဓါဆို တစ်ညလုံး မီးပုံဘေးမှာ ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ စကားတွေထိုင်ပြောနေတာ အိပ်ရမှာတောင်မေ့သွားတယ် 😁
အဲ့ကြောင့် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဖြစ်စေ ချစ်သူနဲ့ပဲဖြစ်စေ တယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားထဲ ရင်းနှီးမှုပိုတိုးစေပြီး ငွေ၊ အချိန်ကုန်ကြေးကျသက်သာတဲ့ ဒင်ကြီး Camping ကိုတော့ တစ်ခါလောက်သွားကြည့်စေချင်ပါတယ်။😍 ပြန်လာရင် စိတ်လက်ပေါ့ပါးသွားမှာတော့အမှန်ပါ။
Tripod နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေကြသော မမများ😊
ဟိုဘက်တွေမှာလဲ Camp site တွေရှိသေးတယ်
ကဲ Tent ထိုးကြမယ် 😁
Tent ထိုးတတ်တဲ့ ဆရာကြီးပါတော့ ဘေးနားက ကူရုံပဲ ဟီး
Camp site ရှေ့မှာ
ကဲ ညနေခင်းလေး ဘလောက်လှလဲပြော
မိမိတို့ ၏ အဖွဲ့
Camp site မြေပုံ
ဟိုဘက်က Camp site မှာနေရာသွားရွေးတော့ ဒီလိုလဲဖြတ်ရသေးတယ်
I love camping ☺️
နေမဝင်သေးတော့ Tent ထဲမှာ သီချင်းလေးနဲ့ ဆွေး
😍 organic farm ကကန်စွန်းရွက်တွေရယ် အကိုတွေအမတွေပါလာတဲ့ အစားသောက်တွေရယ် ပြီးပြည့်စုံပေါ့
ခင်ရာဆွေမျိုး မြိန်ရာဟင်းကောင်းဆိုသလို ❤️
ဓာတ်မီးလေးတွေကိုယ်စီနဲ့ စားခဲ့တဲ့ ဖက်ထမင်း သိပ်အရသာရှိတာပေါ့
ညကျရင် ပါလာတဲ့ LED မီးလေးတွေနဲ့အလှဆင်ပြီး အမှိုင်းလေးတဖြတ်
ပြောင်းဖူးကအသက် 😆 —
ညကျရင် ဝိုင်ပြီး စကားတွေပြောကြမယ်
ကဲ ဟာသတွေပြော မေးမြန်းစူးစမ်းအစီစဉ်တွေကပ
ကော်ဖီလေးနဲ့ UNO ကစားဝိုင်း
တဲ့ မီးဘေးကကယ်လာတဲ့ အကင်တွေ 😂😂😂
မနက်စောစော tent အပြင်ဘက် ရောင်နီလာပြီလေ
မနက်စောစော ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်🤗
ဒါကတော့ Toilet လေး.
ပြန်ခါနီး Reception ရှေမှာ
အဆုံးထိ ဖတ်ပေးလို့ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရ
အားလုံးပဲ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ ဘေးအန္တာရယ်ကင်းစွာ ခရီးသွားလာနိုင်ကြပါစေ ❤️